တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များကို သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ် ချက်ပြုတ် ရောင်းချခြင်း မရှိစေရန် လှုပ်ရှားမြှု - Yangon Media Group
တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များကို သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ် ချက်ပြုတ် ရောင်းချခြင်း မရှိစေရန် လှုပ်ရှားမြှု
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်နှင့် တာမွေမြို့နယ်တို့တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို သယ်ဆောင်ရောင်းဝယ်ချက်ပြုတ်ရောင်းချခြင်းမရှိစေရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု အနေဖြင့် ကားမှတ်တိုင်များနှင့့်ြှ ယာဉ်များပေါ်တွင် ပညာပေးပိုစတာကပ်ခြင်းများကို စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ် မြေများထိန်းသိမ်းရေး၊ ဥပဒေအရထားမြစ်ထားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို သယ် ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ရောင်းချခြင်းမရှိစေရေးအတွက် အသိပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့် နံရံကပ်ပို စတာကပ်ပွဲကို တာမွေမြို့နယ် တာမွေယာယီ ဈေးတာဝန်ခံရုံးခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သစ်တောဦးစီး ဌာနမှ ဦးစီးမှူး ဦးစိုင်းရွက်ဆိုင်က ”အဓိကကတော့ ဈေးသူဈေးသားတွေကို တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သားကောင်များ၊ ယင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၊ အသားများရောင်းဝယ်သယ် ဆောင်တာတို့၊ ချက်ပြုရောင်းချတာတို့မရှိ စေရေးအတွက် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အမျိုး အစားအလိုက် ဥပဒေအရကာကွယ်တား မြစ်ပုံ၊ ကျူးလွန်ပါက ကျခံရမယ့်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိဖို့နဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေ ပပျောက်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က ပြောသည်။
တာမွေယာယီဈေးဆိုင်ခန်းများနှင့် ဈေး ကြော်ငြာသင်ပုန်းများတွင် ပညာပေးနံရံကပ် ပိုစတာများကို ချိတ်ဆွဲခဲ့သည့်အပြင် ကျိုက္ကဆံ လမ်းမကြီးလိုင်းကားမှတ်တိုင်များတွင် ပညာ ပေးပိုစတာကပ်ခြင့်းြှ လိုင်းကားပေါ် တွင် ပညာပေးပိုစတာကပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဦးစိုင်းရွက်ဆိုင်က ”လိုင်းကားတွေ အားလုံးကိုတော့ မကပ်ရသေးပါဘူး။ ကားအချို့ကို ဒီနေ့စတင်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ- လှိုင်သာယာမှ မြို့တွင်းကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေပါပါတယ်။ အခြားဈေးတွေကိုလည်း အခုလိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုဆက်လက်ပြောသည်။ အဆိုပါပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့် ပညာပေးပိုစတာကပ်ပွဲသို့ တာမွေမြို့နယ် ဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်စိုး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးလှဖုန်းကျော်၊ စည်ပင်အမှုဆောင်အရာရှိ ဦးယုလေးမောင်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ စည်ပင်ဝန်ထမ်းများနှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ စစ်​​တွေမြို့တွင် လင်းနေ သရုပ်ဆောင်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်
'ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကို စော်ကားတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ပြောလာတာကိုတော့ အစ်မအနေနဲ့ သည်းမခံနိုင်ဘူး' သ?
ခြေဥပြင်ဆင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် ဒီချုပ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူအချို့ ပါဝင်နေပြီး မိမိတို??
ဘီလ်ဘာအိုနှင့်ပွဲတွင် မက်ဆီကစားရန်ခက်ခဲမည်ဟု ဗဲလ်ဗာဒီခန့်မှန်း
လားရှိုးမြို့၌ ကျင်းပမည့် တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံပွဲတော်တွင် ညမီးကြီး၊ စိန်နားပန် မီးပုံး
နိုင်ငံတကာအဆင့် ဓာတ်အားစနစ် အချိန်မီဖြစ်ပေါ်လာရေး ဆွေးနွေးပွဲရလဒ် လွှတ်တော်နှင့် ဝန်ကြီးဌာ?